▷ Hello Microsoft! Ma jiraa qof dhegaysanaya? - 【 Isbarbardhigga】 2022
Microsoft, waxaan u baahanahay inaan wada hadalno. Waxa aad beryahan dambe wax ku samaynaysay software-kaaga desktop-ka kaas oo iga dhigaya in aan la yaabay in aad run ahaantii dhagaysato macaamiishaada.
Waxaan si joogto ah ku arkay adiga oo codaynaya oo hirgeliya waxyaabo aan macno lahayn. Marka hore, aynu aqbalno in isticmaalayaashu ay maamulaan Windows sababtoo ah waxay u baahan yihiin codsi ama muuqaal muhiim ah. (Haddii aysan ahayn, waxaa laga yaabaa inay mar hore u haajireen goob kale.) Tweet-kan dhowaa wuxuu igu dhaliyay: "Qiimaha ay Windows u leedahay macaamiisha iyo ganacsiyada maanta maaha iid indhaha. Waxay haysataa in ka badan 30 sano oo apps ah, kuwaas oo qaar badan oo ka mid ah ay ahayd in ay hawlgab noqdaan wakhti dheer ka hor. Haddii aan dib u bilaabo, waa inaan ka tanaasulaa taas, oo madal ayaa noqon doonta mid aan qiimo lahayn inta badan.
Soo jiidashada muuqaalku runtii ma caawinayso; dhab ahaantii, waxay hor istaagi kartaa qanacsanaanta macaamiisha Windows. Laakin beryahan danbe waxaan arkaa dad badan oo indhaha soo qaba.
Tusaale ahaan, dhawaan Windows 10 iyo 11, waxay hirgelisay sifo cusub oo la yiraahdo Find Highlights. Waxaa loo dallacsiiyay sidii kor loogu qaadi lahaa khibrada raadinta Windows iyadoo la keenaya dhacdooyin muhim ah oo macno leh, faylal, iyo agab isticmaalayaasha. Raadinta Highlights waxay si yar uga duwan tahay isticmaalayaasha iyo ganacsiyada caadiga ah. Midda hore, waxay soo bandhigi doontaa macluumaad macno leh sida ciidaha, maalmaha dhalashada, iyo waqtiyo kale oo waxbarasho oo ku salaysan gobolka isticmaalaha. Isticmaalayaasha ganacsiga, dhanka kale, waxay arki doonaan faylal khuseeya, xiriirada, iyo macluumaadka kale ee ururka.
Waxaa muhiim kuu ah inaad ogaato in fikradan ah "isticmalayaasha joogtada ah iyo kuwa isticmaala ganacsiga" aysan macno badan samaynaynin adduunkan shaqada-guriga ee aan hadda ku noolnahay. Sii isticmaalaha aragtiyo iyo ficilo kala duwan taas oo ku xidhan mishiinka Windows ee ay isticmaalayaan. dib u isticmaalku waa jahawareer. Jooji fikirka ah in isticmaale "caadi ah" loola dhaqmo si ka duwan kan isticmaalaha "shirkad". Labadeenaba waxaan rabnaa nidaamka qalliinka oo si fiican u shaqeeya. Kaliya iska hubi in kombuyutarkayga uu kor u kacay markaan rabo oo uu shaqeeyo. Marka aad sidaan u dhuuqdo, waxa aad ka tagaysaa dadka iyaga oo u malaynaya in uu fayras ku dhacay oo ay la yaaban yihiin waxa la sameeyo. Kuweenna maamula mishiinka Windows waxaa si joogto ah lays waydiiyaa su'aalo ku saabsan "hagaajinta." (Diiwaanka, haddii aad rabto inaad ka takhalusto Qodobbada Raadinta, tilmaamuhu waa halkan.)
Waxa aan ula jeedo ayaa ah in waxyaalahan cusubi aanay inta badan ahayn waxa ay dadku rabaan. Ma rabaan "sifo" raadinta, waxay rabaan raadinta inay shaqeyso oo kaliya.
Waayo-aragnimada hadda jirta ee Windows 11 waa shaqo kale oo socota oo leh natiijooyin isku dhafan. Sida Rafael Rivera tilmaamay, Windows 11 25120 waxay tijaabinaysaa sanduuqa raadinta desktop cusub ee desktop-ka, halkaas oo natiijooyinka had iyo jeer lagu muujiyo Microsoft Edge, iyadoo laga gudbayo biraawsarkaaga la habeeyey. (For Windows 11 Insiders, haddii aad rabto inaad aragto shaqadan, waxaad u baahan doontaa inaad soo dejiso qalab kuu ogolaanaya inaad awood u yeelato imtixaannada ikhtiyaariga ah. Sida Rivera tilmaamay, soo deji qalabka ViVe, fur amar sare oo degdeg ah, oo aad u socotid galka halka uu ku yaal ViveTool la soo saaray Geli amarka soo socda isla markiiba amarka: vivetool addconfig 37969115 2 sanduuqa raadintana waa la hawlgelin doonaa.)
Haa, Microsoft, waxaad noo sheegtay in laga yaabo in kuwan "xubooyinka koodka tijaabada" aysan ku dhamaanayn noocyada ugu dambeeya ee sifooyinka la sii daayay. Laakiin waxaa xiiso leh inaad aragto sida aad waqtigaaga u luminayso.
Waxaa laga yaabaa inaad hubiso xoogaa jawaab celin ah oo ku saabsan waxa isticmaalayaashu runtii rabaan: widget cimilada wanaagsan, tusaale ahaan. Runtii. Tag app-ka jawaab celinta ee gudaha Windows 10 waxaadna arki doontaa cayayaan la taageeray in ka badan 1400 jeer. Dhibaatadu halkan waa in qaybta cimilada ee app cimiladu aysan mar dambe muujineynin waqtiyada, ugu yaraan isticmaalayaasha qaarkood.
Hadda waxaan arki karaa wakhtiyada lagu soo bandhigay abka Cimiladayda, laakiin si cad kuwa kale waxay arkayaan dhibaato. Halkaa waxaa ku jira dhibaatada "isbeddellada dribble" ee aad sameyso. Wax si lama filaan ah ayey isu beddeli doonaan mana cadda in dhibaatadu tahay kutaan, cilad ku meel gaar ah ama wax ula kac ah. Badana marka isbeddel lagu dhawaaqo, waxay qaadan kartaa toddobaadyo ka hor inta qofna uu dhab ahaantii ku arkin inuu ka soo muuqdo kombayutarkiisa. Markaas, isticmaaleyaal badan ayaa laga yaabaa inay illoobeen. Ama waxay u maleynayaan in kombuyuutarkooda la jabsaday ama uu leeyahay fayras. Markii ay yimaadeen Qodobbada Muhiimka ah ee Raadinta, isticmaaleyaasha qaarkood waxay u maleeyeen inay wax ka khaldan yihiin kumbuyuutarkooda. Iyo widget-ka cimilada, ma cilad baa mise sifo? Ma naqaano.
Xitaa isticmaalayaasha ganacsiga iyo maamulayaasha miiska caawinta IT, moodalkani waa jahawareer. Marka qof uu soo waco miiska caawinta dhibaato, maamuluhu waxa laga yaabaa in aanu ka warhayn arrintaas sababtoo ah isbeddelku kama dhicin goobtooda shaqada. Sidaa darteed, waa inay meel fog aadaan goobta shaqada si ay u fahmaan waxa dhacaya. Aad ayey uga fog tahay ku habboonaanta.
Oo hadda waxay qaadanaysaa habka "haggle" ee Xafiiska, ku riixida qof kasta oo doortay kanaalka ganacsi nus-sannadka ah kanaalka bilaha ah, taasoo la macno ah isbeddelada iyo hagaajinta ayaa soo muuqan doona marar badan. (Wax badan ayay ka dhacdaa xafiiskayga, maalin waxaan ku arkaa habdhaqan gaar ah oo ka jira Xafiiska, ka dib maalinta xigta way is beddeshaa. Kadibna waa inaan raadiyaa nambarka xafiiska si aan u ogaado waxa dhacay iyo sababta.)
Microsoft, waxa laga yaabaa in aad u baahato in aad sidaan u xoqdo isbeddellada si aad u cabbirto isticmaalka iyo agabka. Laakiin kuweenna isticmaala kombuyuutarrada, waxay inta badan ku noqotaa naxdin iyo jahawareer waxayna nagu qasbeysaa inaan baarno sababta ay wax si lama filaan ah uga duwan yihiin. Waxaad ku xallin kartaa dhibaatadan adigoo si cad u caddeeya inaad isbeddel ku samayso nidaamyadayada.